Akwụkwọ Ozi Si n’Aka Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
Ezi Ụmụnna Anyị:
“Anyị na-ekele Chineke mgbe niile mgbe anyị na-echeta unu niile n’ekpere anyị, n’ihi na anyị na-eburu n’uche mgbe niile ọrụ unu ji ikwesị ntụkwasị obi na-arụ na ndọgbu unu ji ịhụnanya na-adọgbu onwe unu n’ọrụ na ntachi obi unu n’ihi olileanya unu nwere n’Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n’ihu Chineke bụ́ Nna anyị.” (1 Tesa. 1:2, 3) Amaokwu ndị a kwuru nnọọ ihe anyị na-eme n’ihi unu. Anyị na-ekele Jehova maka unu nakwa maka ọrụ ọma unu na-arụ. Gịnị mere anyị ji eme otú ahụ?
N’afọ gara aga, unu ji ‘ikwesị ntụkwasị obi rụọ ọrụ gbasara Alaeze Chineke, jirikwa ịhụnanya dọgbuo onwe unu n’ọrụ’ maka ya. Ọtụtụ n’ime unu gbalịrị jekwuoro Jehova ozi. Ụfọdụ n’ime unu kwagara n’ebe a chọkwuru ndị nkwusa ná mba ha ma ọ bụ ná mba ọzọ. Ndị ọzọ kwusara ozi ọma n’ebe ndị na-ekwo ekwo. Ọtụtụ rụkwara ọrụ ọsụ ụzọ inyeaka n’oge Ncheta Ọnwụ Jizọs, n’ọnwa ndị ha nwere onye nlekọta sekit, ma ọ bụ n’oge ahụ anyị kesara traktị, ya bụ, n’Ọgọst afọ 2014. Ọ bụ eziokwu na otú ihe si dịrị otu onye nwere ike ịdị iche n’otú o si dịrị ibe ya, ihe doro anyị anya bụ na unu ji obi unu niile jeere Jehova ozi. Unu emeela. (Kọl. 3:23, 24) N’eziokwu, “ọrụ unu ji ikwesị ntụkwasị obi na-arụ” so n’ihe mere anyị ji na-ekele Jehova.
Obi dịkwa anyị ụtọ maka “ndọgbu unu ji ịhụnanya na-adọgbu onwe unu n’ọrụ” n’ịrụ ebe ndị anyị na-anọ efe Jehova. Anyị chọsiri ha ike n’ihi na ọtụtụ ndị na-abata n’ọgbakọ. (Aịza. 60:22) Dị ka ihe atụ, n’afọ gara aga, anyị nwere ndị nkwusa dị nde asatọ, narị puku abụọ na otu, na narị ise na iri anọ na ise. Nkezi ndị anyị mụụrụ Baịbụl kwa ọnwa dị nde itoolu, narị puku anọ na iri itoolu na itoolu, narị itoolu na iri atọ na atọ. N’ihi otú a ọtụtụ ndị si na-abata n’ọgbakọ, e kwesịrị ịrụzigharị ọtụtụ alaka ụlọ ọrụ ma ọ bụ wusaa ha. Anyị chọkwukwara Ụlọ Nzukọ Alaeze. Anyị chọkwara ịrụ ọfis ndị nsụgharị n’ọtụtụ ebe n’ụwa ka ndị nsụgharị anyị nwee ike ibi n’ebe a na-asụ asụsụ ha na-arụ ọrụ ha.
N’ihi ya, onye ọ bụla kwesịrị ịjụ onwe ya, sị, ‘Olee ihe m nwere ike ime iji nye aka rụọ ebe ndị a anyị na-anọ efe Chineke?’ Ụfọdụ n’ime anyị nwere ike iwepụta onwe ha soro rụọ ha. Ma anyị mà arụ ma ọ bụ na anyị amaghị arụ, anyị nwere ike iji ihe ndị dị oké ọnụ ahịa anyị nwere nye onyinye a ga-eji rụọ ebe ndị ahụ. (Ilu 3:9, 10) Mgbe ndị Izrel na-arụ ụlọikwuu, ha nyere onyinye karịrị akarị nke na a gwara ha enyezila. (Ọpụ. 36:5-7) O doro anya na ihe a Baịbụl kwuru ha mere ga-emetụ anyị n’obi ma mee ka anyị na-enye onyinye. “Ndọgbu unu ji ịhụnanya na-adọgbu onwe unu n’ọrụ” n’ihe ndị a so n’ozi dị nsọ unu na-ejere Jehova. O sokwa n’ihe mere anyị ji na-ekele ya.
E nwere ihe pụrụ iche na-enye anyị ọṅụ. Ihe ahụ bụ na ụmụnna anyị na-atachi obi. Dị ka ihe atụ, malite n’afọ 1950, gọọmenti Saụt Koria na-atụ ụmụnna anyị ndị nwoke mkpọrọ maka na ha ekweghị aba amị ma ọ bụ rụọ ọrụ agha. Kemgbe ahụ, a tụọla ọtụtụ ụmụnna anyị mkpọrọ, mechaakwa tụọ ụmụ ha. E nwekwara ndị nke ka nọ na mkpọrọ. N’agbanyeghị nke a, okwukwe ha ka siri ike. Otú ha si atachi obi na-eme ka okwukwe anyị na-esikwu ike.
N’Eritria, a tụrụ ụmụnna anyị nwoke atọ mkpọrọ kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ. E nwekwara ụmụnna anyị ndị nwoke na ndị nwaanyị na ụmụ ha atụrụ mkpọrọ obere oge. Anyị emeela elu mee ala ka a hapụ ha ma o nwebeghị isi. N’agbanyeghị mkpọrọ a, okwukwe ụmụnna anyị ka siri ike. Ha ka na-efe Jehova, n’agbanyeghị na a na-emekpọ ha ọnụ. Anyị na-echeta ha n’ekpere anyị.—Rom 1:8, 9.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ọtụtụ n’ime unu anọghị na mkpọrọ. Ma, ihe ndị dị ka nká na ọrịa na-anaghị ala ala na-enye ọtụtụ n’ime unu nsogbu. E nwekwara ụfọdụ n’ime unu di ha ma ọ bụ nwunye ha ma ọ bụ ndị ezinụlọ ha na-abụghị Ndịàmà Jehova na-akpagbu. Ụfọdụ n’ime unu na nsogbu ndị mmadụ na-amaghị banyere ha na-alụ. N’agbanyeghị ihe ndị a, unu ka ji obi unu niile na-efe Jehova. (Jems 1:12) Anyị na-aja unu mma. Obi a unu na-atachi so n’ihe ọzọ mere anyị ji na-ekele Jehova.
N’eziokwu, ọrụ unu ji ikwesị ntụkwasị obi na-arụ, ndọgbu unu ji ịhụnanya na-adọgbu onwe unu n’ọrụ, nakwa ntachi obi unu, socha n’ihe ndị mere anyị ji ‘na-ekele Jehova, n’ihi na ọ dị mma.’ (Ọma 106:1) Anyị hụrụ unu niile n’anya. Anyị na-arịọkwa Jehova ka o mee ka okwukwe unu sikwuo ike, ka ọ na-egboro unu mkpa unu, nakwa ka ọ na-agọzi unu ka unu nwee ike ịna-efe ya ruo mgbe ebighị ebi.
mailto:?body=Akwụkwọ Ozi Si n’Aka Òtù Na-achị Isi%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015049%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Akwụkwọ Ozi Si n’Aka Òtù Na-achị Isi